Erlọ ọrụ Laser Optics - China Laser Optics Manufacturers, Suppliers
Kristal na-abụghị nke a
Er: YSGG / Er, M: YSGG
Nd, :R: YAG
Kristal gbanwere Q
Ihe Ngosiputa Laser
Laser Flash Oriọna
Ugboro abụọ-Concave Anya m
Ndị na-akpọ Achromatic Depolarizers
Ndị na-eme mkpọtụ
Ezi Odoro Odoro Udo
Obere iwu Waveplate
Mpempe akwụkwọ Mbupu-Order
Ejiri Wavelength Wave
Glan Laser Polarizer nke
Ihe ngwa anya anyị na-enye na-ekpuchi laser optics; laser flash oriọna; ihe na-eme ka ihe na-emepụta ihe na ihe infrared. Gụnyere windo, lens, prisms. N'ozuzu, a na-eji ngwa ma ọ bụ na-arịgoghị anya anyị dị ka arịrịọ ndị ahịa chọrọ.
N'ozuzu, a Xenon oriọna mkpa ka akara na quartz iko tube nke abụọ metal electrodes na-echekwa ike eletrik, mgbe a akwa agụụ tube jupụtara xenon gas ọgwụgwọ, ka mmepụta usu ìhè usu ihapu nke gas orùrù oriọna. Xenon Oriọna ọtụtụ-eji na laser osise igwe, laser ịgbado ọkụ igwe, laser mkpọpu ala igwe, laser mma igwe. Anyị na-emepụta Xenon Oriọna nhọrọ nke àgwà UV nyo quartz tube dị ka tube ihe na-elu àgwà njupụta thorium tungsten, barium, cerium tungsten electrode tungsten ma ọ bụ xenon oriọna electrodes, na a ibu ikike, elu arụmọrụ mgbapụta laser doo àgwà, ndụ ogologo na ndị ọzọ e ji mara .
DIEN TECH na-enye ọkwa dị elu dị elu na nke a na-eme nke ọma na ihe nhichapụ nke ọma na ntanetị site na 200 nm ruo 2300 nm.
Plano-Concave Anya m
Plano-concave lens bụ ihe kachasịsịsị eji mee ihe maka ntụgharị ọkụ na mgbasawanye mgbasa. Ejiri mkpuchi antireflective, a na-eji anya m mee ihe na sistemụ anya dị iche iche, lasers na mgbakọ.
Super Achromatic Waveplate nwere ike ịnye oge na-egbu oge na nnukwu brọdband. Broadband nke Quarter Waveplates bụ 325-1100nm ma ọ bụ 600-2700nm, Half Waveplates bụ 310-1100nm ma ọ bụ 600-2700nm. Super Achromatic Waveplate nke ọkọlọtọ nakweere Glued strutures.We nwere ike hazie nlọghachi oge na ogologo dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Single efere Ezi Zero-Order Waveplate nwere sara mbara bandwidth, obosara okpomọkụ bandwit, obosara n'akuku bandwidth, elu mmebi fọrọ nke ọma ọkọlọtọ wavelength: 1064，1310nm, 1550nm na ọkpụrụkpụ ruo 0.028mm.
Obere Waveplates dị obere karịa ọtụtụ mpempe akwụkwọ na-efegharị efegharị n'ihi obere mkpa ya na-erughị 0,5 mm). Mma okpomọkụ (~ 36 ° C), Wavelength (~ 1.5 nm) na ihe omume n'akuku (~ 4.5 Celsius) bandwit na elu mmebi thresholdmake ya n'ọtụtụ ebe na-eji na-eji ngwa. Ọzọkwa ọ bụ echekwa.
Adreesị:No.888, Middle Taodu Ave. Mpaghara Longquanyi, Chengdu, PRChina